Kuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwintengo eqinile? | AASraw Fat Loss
I-SARM esetyenziswa ngokuqhelekileyo: Kukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla?
/Blog/Ukulahlekelwa ngamatye/I-SARM esetyenziswa ngokuqhelekileyo: Kukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla?
ezaposwa ngomhla 12 / 29 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ukulahlekelwa ngamatye.
UKUBA UFUNA UKUZIWA YINI I-SARMS, UKUBA SEBENZA KANYE NOKUSEBENZISA NGOKUSETSHENZISWA KWEZINDAWO, NGOKUBA UFUNA UKUFUNDA LE NKCUKACHA.
1.SARM i powder eluhlaza 2.Kusebenza njani iziyobisi ze-sarm?
3.MK-677 / Ibutamoren 4.Izithuba zeMk-677 Ibutamoren
5.RAD140 / Testolone 6. Isisombululo se-Testolone (i-RAD140) Ubukhulu obuninzi
7.MK 2866 / Ostarine I-8.Izithuba ze-Ostarine (MK-2866) Ubuninzi obunamandla
9.LGD-4033 / VK5211, iLigandrol 10.Izithuba ze-LGD-4033 (Ligandrol)
11.GW 501516 / Cardarine 12.Isilinganiselo se-GW 501516 (Cardarine)
13.Ukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla?
I-GW501516 / iCarardarine i-powder video
|. GW501516 (Cardarine) U esisiseko Abalinganiswa:
igama: GW501516 / Cardarine
I-molecular Formula: C21H18F3NO3S2
Isisindo somzimba: 453.498
umbala: Ukukhanya kristall powder
1.SARM i powder eluhlaza
I-SAR imele i-modorator ye-androgen ye-receptor ekhethiweyo, kwaye luhlobo lweziyobisi ezinomzimba ofana ne-anabolic steroids.
AmaSARM aveliswe ekuqaleni kubantu abanezifo ezinje ukuchitheka kwemisipha, i-osteoporosis, i-anemia, kunye nokukhathala okungapheliyo.
Zijoliswe ukuba zibe ngenye indlela ephilileyo kwi-testosterone. Ingaba baya kuzaliseka loo mbono awunakunqunywa.
Ngoku, abaqeshisi bomzimba badla ngokuthatha iiSARM ngesinye sezizathu ezibini:
(1) Ukufumana "iinyawo zabo ezimanzi" kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ze-anabolic ngaphambi kokuya kumjikelezo wemveli yesteroid.
(2) Ukwandisa ukuphumelela kwemigudu ye-steroid ngaphandle kwemiphumo ecaleni engakumbi okanye izingozi zempilo.
Abaninzi bemizimba yomzimba bakholelwa ukuba ii-SARM zinceda kakhulu ukusika ngenxa yokuba zinceda ukugcina ubunzima obubuthakathaka kodwa kubonakala zingenakwandisa ukugcinwa kwamanzi.
2.Kusebenza njani iziyobisi ze-sarm?
Eyona, uphando lubonisa ukuba ii-SARM azikho ezinamandla ezinokwakhiwa kwemisipha njenge-steroids yendabuko, kodwa ngokuqinisekileyo iphumelele kunanoma yintoni na inendalo ongayithatha (njenge-creatine).Zithandwa kakhulu kubadlali kuba kunzima ukufumana ukuvavanywa kweziyobisi. Ngoku, ukuba yonke into endiyithethayo ngoku ufuna ukugijima kwiGoogle, i-wallet esandleni, kungekho ngokukhawuleza ... asikwenziwanga okwamanje.
Kukho iiSARM ezimbalwa kwiimarike, kwaye ezinye zizinzileyo kwaye zinomngcipheko ophezulu weziphumo zecala kunezinye.
Okuthandwa kakhulu kukuba:
I-LGD-4033 / VK5211, iLigandrol
I-Mk-677 ibutamoren luhlobo lonyango olunokukunceda ukuba uphucule imetabolism yakho, amandla esithambo, impilo kunye neentsuku zakho kweli hlabathi. Imveliso isebenza ngokukhuthaza ukukhula kwe-hormone ebalulekileyo kunye ne-insulin njengento yokukhula i-1, eyaziwa njenge-IGF-1. Kwakhona kukhuthaza ukukhula kwe-IGFBP-3.
I-MK-677 inezinzuzo ezinkulu ze-5, ezi:
Ukuphucula iSimo seBhunga
Ukwandisa Amandla Amandla
Ukuthintela ukuKhula kweNdlela
Ukwandisa ubude obude
Abaqulunqa umzimba, abagijimi kunye nabaqeqeshi bamandla bahlala befuna iindlela ezingabancedisa ukuphucula ukusebenza kwabo kunye nokufumana imisipha emininzi. Ewe, kukho imveliso emininzi ekhona apho kunokukunceda ufezekise nantoni na oyifunayo, nangona zininzi zezi mveliso zineempembelelo ezingafuni ukuba yinxalenye yazo.
Ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo zibandakanya uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukulandelana kwimizekelo, ukungabikho kwempilo kunye nezinye iingxaki ezinxulumene nempilo. Lucky kuwe, Mk-677 ibutamoren iye yavavanywa kwaye yafakazelwa ukuba ilungele ukwakha umzimba kunye nayiphi na enye imisebenzi yokuqeqesha amandla. Qinisekisa ukuba uhlolisise ukuhlaziywa kwemveliso kwenye i-SARMS ethandwa yi-Ligandrol kunye ne-Ostarine, enika iziphumo ezinkulu.
4.Izithuba zeMk-677 Ibutamoren
Ngokwezifundo eziliqela, i-MK-677 Ibutamoren isisindo esiphakathi kwama-milligram emihlanu ukuya kuma-milligram (i-5-25mgs) ngemini sele ibonise iziphumo eziphambili. Kukho abantu abambalwa abaye babonisa iziphumo eziphezulu ngamanani aphezulu, kodwa i-5-25 mgs yinto enconywayo. Enyanisweni, ukuba ungumqali, kucebise kakhulu ukuba uqale ngeeritha yee-milligrams.
I-Testolone (i-RAD140) yinkomfa entsha kwi-family of modulators ye-androgen ye-receptor ekhethiweyo, okanye njengoko iyaziwa kangcono - iiSARMS. Ngoko ke, inzuzo yalo enkulu anabolic steroids kukuba linikeza iziphumo ezifanayo ezilungileyo, ngokungabikho nayiphi na imiphumo emibi. Enyanisweni, oku kubaluleke kakhulu, nangona kuthelekiswa namanye amaSARMS.
Kwizifundo ezibandakanya i-RAD140, eyaziwa nangokuthi yi-Testolone, uvavanyo lwaluqhutyelwa kakhulu kwiinkoma kunye neenkwenkwezi. Nangona kunjalo, iziphumo zezi zifundo zibonise ukuba zi thembisa kakhulu. Ngokomzekelo, kukho ubungqina bokuthi i-RAD140 inepropati eyingqayizivele yokulwa neprotected-prolonged due to use testosterone, eyenza ibe yi-arhente egciniweyo ye-androgenic steroids enokuthi ibangele le nto ingathandekiyo.
Ukongezelela, xa i-Testolone yanikelwa iinkwenkwezi, kukho ukwanda okukhulu kwi-bodyweight ngexesha lokulawula. Olu konyuka kwinqanaba elixhambileyo lixhomekeke kumlinganiselo wokuxhomekeka, ngoko ke ngamadaka amakhulu kunokuba ukwanda kwenyameko kuninzi kunye nokulahlekelwa kweethambo ezinamafutha. Ngenxa yoko, i-testolone yi-SARM yinyani kunye nazo zonke iipropati ezilindelwe kwizixhobo zolu hlobo-ukhuseleko nokusebenza.
I-6.Iziphumo ze-Testolone (i-RAD140) I-Powder emninzi
Amayeza aphakanyisiweyo we-RAD140 ahluka kwi-20 ukuya kwi-30 milligrams (mgs) ngosuku, kwaye ubude bemijikelezo eyiyo yimizuzu eyi-12-14.
Njengophando lweekhemikhali, I-RAD140 ifanele ifumane kwifom yefayili kuthathwe ngomlomo. Kubalulekile ukulahla i-liquid ngqo emlonyeni, njengoko inganamathela kwiindonga zeglasi xa zixutywe kunye neengxube. Emva kokuwushiya emlonyeni, ungayigxotha phantsi ngamanzi okanye ijusi lamagilebhisi. Ngenxa yobomi obude obude, i-RAD140 ingahlawulwa kanye kuphela ngosuku, kwaye akukho mfuneko yokuba ithathe amaxesha amaninzi ngosuku.
I-Enobosarm, eyaziwa ngokuba yi-Ostarine okanye i-MK 2866, yi-Selective Androgen Receptor Modulator (SARM) eyenziwe ngu-GTx (GTx-024) ukulwa nokuxhatshazwa kwemisipha kunye ne-osteoporosis. Abaninzi bacinga ukuba i-Ostarine ingayifumana isebenzise kwiiplani zonyango zokutshintsha indawo, kunye nokunyangwa kwe-sarcopenia, i-cachexia kunye ne-atrophy ye-muscle. Le yinzuzo exabisekileyo kakhulu kulabo bahlukunyezwa nezifo, ngokugqithiseleyo ngenxa yokuba i-SARM iboniswe ukuba ayinayo impembelelo kwi-muscle engeyiyo.
I-Ostarine, eyaziwa nangokuthi yi-MK-2866 yi-SARM (imodyuli ye-androgen receptor module) eyenziwe ngu-GTx ukuphepha nokuphatha ukuxhatshazwa kwemisipha. Ingadlulanga kamva ukuba yiprogram yokukhusela i-atrophy (ukuphela kokuphela kwenxalenye yomzimba), i-cachexia, i-sarcopenia kunye neHormone okanye iThertosterone Replacement Therapy.
Olu hlobo lwe-SAR alukwazi ukugcina kuphela ubunzima bomzimba kodwa luyanokwandisa. I-Ostarine idla ngokuphambuka njengeS1 kodwa i-S1 idalwe kwangaphambili kwaye ayisayi kukhulisa ngakumbi.
I-8.Izithuba ze-Ostarine (MK-2866) Ubuninzi obunamandla
UMK 2866 nguSARM olawulwa ngomlomo. Ngeenjongo zokulondolozwa kwemisipha ngexesha lokutya, ubuncinane be-15mg ngemini ngokuqhelekileyo kuthatha. Ukuze ukukhula kuqhutywe, abaninzi abasebenzisi baya kufumana i-20-25mg ngosuku ukuba yindawo efanelekileyo yokuqala. Abanye abantu abanzima kunokuba bafumane i-30mg ngosuku, kodwa ininzi idatha ibonisa ukuba amanqanaba amaninzi awenza amanani amaninzi ngokuthelekiswa namacandelo e-20-25mg kumadoda amaninzi.
Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kuya kugcina iiveki ze-6-8 ngeeveki ze-4 ezingekho kweSARM xa umjikelezo we-Ostarine ugqibile. Nangona ukunyuswa kwe testosterone akunakunzima, i-PCT inakho okanye ayiyi kuyimfuneko. Nangona kunjalo, ukunyanzelwa kwamanye kuya kuba khona kwaye kukulungele ukunika umzimba ithuba lokumisa. I-MK 2866 inomyinge wobomi malunga neeyure ze-24; kwimihla yokutsala kwansuku kwanele. Akukho nzuzo kumayeza amaninzi ngosuku.
9.LGD-4033 / VK5211, iLigandrol
I-LGD-4033, eyaziwa kangcono njenge-Anabolicum yi-Selective androgen Receptor Modulator (SARM) efana ne-testosterone i-anabolic kodwa ngaphandle kwemiphumo ebonisa kakhulu ngaphandle kweethambo zomzimba. I-Ligand Pharmaceuticals, i-ligand, ngokubhekiselele kumamolekyu asebenzayo, i-LGD-4033. I-Ligand Pharmaceuticals zenzele igama ngokwabo ngophando lwe-SAR kunye ne-GTx, ezo zibini ezimele ubuninzi bezinto ze-SARM kule minyaka elishumi edluleyo.
I-LGD-4033 yenye yeSARMS ezitsha eziphume. I-SARM engekho-steroidal yomlomo ebopha nge-AR eyenza iziphumo ezinjenge-steroid zithinte i-steroids. Yona i-SARM esondeleyo inokulingana ne-anabolic ngokwemandla. I-LGD-4033 inamandla kunazo zonke i-SARMS ngokubhekiselele kubukhulu obungayifumana.
Iqela le-androgen receptor (AR) ezikhethiweyo zezicubu, zenziwe ukunyanga ukuxhatshazwa kwemisipha ehambelana nezifo ezinzima kunye nezifo ezingapheliyo, ukulahleka kwemisipha kunye nomhlaza. I-LGD-4033 ilindeleke ukuba iphilise inzuzo ye testosterone ngokukhuseleka kangcono, ukuvunyelwa kunye nokwamkelwa kwesigulane ngenxa yendlela yokwenza isicatshulwa kunye nesimo sayo somlomo sokulawula.
I-LGD-4033 iyimoduli ye-androgen ye-receptor (SARMS), kunye ne-SARM yomlomo engekho-steroidal ebophezela kwi-AR kunye nokudibanisa okuphezulu (Ki ye ~ 1 nM) kunye nokukhetha. Kule klasini ye-androgen receptor (AR) i-ligands ekhethiweyo ekhethiweyo, ephuhliswe ukuphatha ukutshabalaliswa kwemisipha ehambelana nomdlavuza, ukugula okunzima kunye nokungapheliyo kunye nokulahleka kwemisipha emdala. I-LGD-4033 kulindeleke ukuba ivelise izibonelelo zonyango lwe-testosterone ngokukhuseleko oluphuculweyo, ukunyamezela kunye nokwamkelwa kwesigulane ngenxa yendlela yokukhetha isicatshulwa kunye nendlela yokulawula yomlomo.
10.Izithuba ze-LGD-4033 (Ligandrol)
I-Anabolicum (i-LGD-4033) ithatha isigxina-ubomi malunga neeyure ze-30 kwaye iyakuthatyathwa ngokuthe rhoqo kwansuku zonke. I-10mg ngemini iyona dose eqhelekileyo enezinye eziya phezulu njengoko i-20mg ngosuku ngeyona nto ingxaki. I-Anabolicum ingafakwa kunye nezinye iiSARM ezifana ne-Ostarine (MK 2866) okanye iKararine (GW-50156).
I-GW-501516, eyaziwa ngokuba yiCarardine, iyimveliso ekhethiweyo ngokusemthethweni ibekwa njenge-PPAR receptor agonist (PPAR-RA). Uphando lwalolu xwebhu luqaliswe kwi-1992 kumzamo ohlangeneyo phakathi kweGlaxoSmithKline (GSK) kunye neLigand Pharmaceuticals. Uphando kulo mveliso lubekwe kumzamo wokubonelela unyango lwezifo ezahlukahlukeneyo zesifo senhliziyo, kunye nesifo sikashukela, ukukhuluphala kunye nezinye iimeko.
Ngokukhawuleza kwafumanisa ukuba i-PPAR-RA yayiphumelele kakhulu ekuphuculeni ukunyamezela, kodwa nayo yaboniswa ukuba ithwale iindleko eziphezulu. Kwafunyaniswa ukuba iKararine yandisa amathuba omhlaza kakhulu, kwaye ngenxa yoko, i-GSK yenze yonke uphando yophando. Nangona kunjalo, izifundo ezivelise iziphumo zomhlaza zisetyenziswe i-Cardarine eyayiyi-500 ukuya kumaxesha e-1000 inani eliza kuthathwa ngumntu. Ukuba umhlaza ngumngcipheko we-dosing standard awuyazi.
I-Cardarine (i-GW-501516) isilwanyana esibopha kwi-PPAR receptor. Yayidalwa kuqala nguGlaxo Smith Kline kunye neLigand Pharmaceuticals kwi-1992. Kwafumanisa ukuba iKardiarine, xa ibophelela kwi-receptor ye-PPAR, iyabamba oko kubizwa ngokuba yi-coactivator ye-PGC-1α enzyme, leyo yandisa ukwanda kwegama lezityalo ezibandakanyekayo kwinkcitho yamandla. Amakhanda aphathwe ngeKararine aboniswe ukuba anyukisiwe i-fatabetric acid metabolism kunye nokukhuselwa kokunyuka kuninzi ekudleni ukutya okungalungileyo, kunye nokukhuselwa okwandisiweyo kwi-2 yeswekile. Kwesinye isifundo kwi-Rhesus iimonke, i-cardarine yaboniswa ukwandisa i-HDL (i-cholesterol enhle) kunye nokunciphisa i-LDL (i-cholesterol embi).
Izizathu zalo mphumela zibonakala zibangelwa ukunyuka kwe-cholesterol ye-transporter ABCA1. Ngamanye amagama, ikhadiarine isebenza ngendlela efanayo yemfuza echaphazelekayo ekusebenzeni. Ukongeza, i-cardarine yafundwa ngokusetyenziswa ekuphatheni isifo se-cardio ngaphambi kokuba ukuphuculwa kwayo kupheliswe kwi-2007.
12.Isilinganiselo se-GW 501516 (Cardarine)
I-GW-501516 ithathwa ngomlomo. Uluhlu oluqhelekileyo lwe-dosage ye-PPAR-RA ngu-10-15mg ngosuku ngeeveki ze-8. Nangona kunjalo, ezinye iingxelo zichaza ukuba iyeza kufuneka zisetyenziselwe iiveki ze-12 ziphumo ezifanelekileyo, kunye ne-20mg ngosuku ngokunyamezelwa ngabantu abaninzi.
ihambelana nokunyamezela kunye ne-fat oxidation kwi-10-15mgs ngosuku ngosuku olufanelekileyo lwe-8 yeveki; nangona kunjalo, i-20mg ngosuku ngeeveki ze-8-12 yi-dose ephakanyisiweyo ukufumana iziphumo eziphambili kwi-gym. I-Cardarine yinto evinjelwe kwimidlalo ethile, ngoko kuyacetyiswa ukuba uqaphele ngokusetyenziswa kwayo ukuba ungumdlali ovivinywayo.
Ukutyelela i-web yethu ye-AASraw ihleli: www.aasraw.com. Emva koko wenze njengamanyathelo angezansi ngezantsi:
1.Ukuqhagamshelana nathi nge-email inquiry system, okanye ummeli we-intanethi ye-skypecustomer (CSR).
tags: Ukulahleka Kwempahla
Kungcono ukunyanga kwe-Post cycle (PCT) xa uthatha i-steroids
Ziziphi ezixhaphakileyo zesondo nokuphucula iziyobisi kunye nendlela ezisebenza ngayo?
Kungcono ukunyanga kwe-Post cycle (PCT) xa uthatha i-steroids	Kuphi ukuthenga i-Trenbolone i-Acetate powder?